Ny fiakaran'ny varotra sy dokam-barotra miorina amin'ny vahoaka | Martech Zone
Ao amin'ny whitepaper momba ny Marketing ho an'ny olona, ​​Atlas dia manome antontanisa mahaliana momba marketing sy dokam-barotra miorina amin'ny olona. Raha mandany fotoana bebe kokoa amin'ny finday amin'ny ankapobeny, ny 25% amin'ny olona mampiasa fitaovana 3 na mihoatra isan'andro, ary 40% ny olona mifamadika fitaovana hamita hetsika iray
Inona no atao hoe Marketing miorina amin'ny olona?
Ny rindranasa sy ny sehatra sasany dia manome ny mpanao dokam-barotra fahaizana mampakatra ny lisitry ny lisitry ny mpanjifa eo amin'ny roa tonta. Ny lisitra dia azo alefa ary ampitahaina amin'ny mpampiasa ao anatin'ny rafitry ny ray aman-dreny miorina amin'ny adiresy mailaka. Avy eo ny dokam-barotra dia afaka mikendry ireo lisitra ireo amin'ny fanentanana manokana.
Hitako mivantana ireo volo-hazo fijaliana ireo. Mampiasa ny findaiko aho handefasako mailaka sy ara-tsosialy, avy eo ny takelaka ataoko mba hamaliana ny maro, ary avy eo midina amin'ny asa lehibe amin'ny solosainako aho. Mazava ho azy fa olana goavana amin'ny dokam-barotra izany. Amin'ny fampiasana ny fomba cookie-tranonkala, dia tena sarotra ny mampifandray ireo sombin-mofo sy mamantatra ny fanantenanao na ny mpanjifanao amin'ireo fitaovana ampiasainy.
Araka ny Nielson OCR Norms:
58% amin'ny fandrefesana miorina amin'ny cookie no voalaza faobe
141% fanamafisana ny fahita matetika amin'ny fandrefesana mifototra amin'ny cookie
Fahamarinana 65% amin'ny tanjona demografika amin'ny fandrefesana mifototra amin'ny cookie
12% ny fiovam-po no tsy hita amin'ny fandrefesana mifototra amin'ny cookie
Izany no antony varotra miorina amin'ny olona mirongatra izao. Raha tokony hividy amin'ny cookies ny browser ary hanandrana mampifandray ireo teboka, ny orinasa dia afaka mampakatra ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny mpanjifa amin'ny sehatra dokam-barotra ary avy eo mikendry ireo mpampiasa ireo amin'ny fitaovana rehetra. Tsy adala izy io - maro ny olona mampiasa adiresy mailaka samihafa eo anelanelan'ny sehatra sosialy sy ny sehatry ny orinasa. Saingy misy tombony lehibe tsy mampino noho ny fizotran'ny fizarana mahazatra sy ny fizarazarana.
Signal sy Econsultancy nanadihady ireo mpivarotra marika amerikana avaratra amerikana avaratra sy mpividy haino aman-jery 358 hahafantarana ny fiantraikany sy ny hoavin'ny haino aman-jery azo resahina ao anatin'ny fikambanan'izy ireo. Hitanay fa ny mpanao dokam-barotra dia vonona hampitombo ny fampiasam-bolan'izy ireo amin'ny vahaolana haino aman-jery azo adiresy izay mampifamatotra ny doka-dry zareo amin'ny tena mpanjifa amin'ny fotoana tena izy, manome hery azy ireo hikendry dokam-barotra nomerika amin'ny fomba marina sy mifanaraka kokoa. Farany, ny dokam-barotra miorina amin'ny olona dia paikady ho azy ireo handresena ny fanambin'ny tontolon'ny fiampitana.
Mahavariana ny valiny! 70% ny mpanao dokam-barotra dia namaritra ny valin'ny fikendrena ny antoko voalohany ho tsara na antenaina, 63% ny mpanao dokambarotra no nitatitra ny tahan'ny tsindry Click-through, ary ny 60% ny mpanao dokam-barotra niaina taham-panovana avo kokoa Ity no sary feno avy amin'ny Signal:
Tags: econsultancyFacebookmpihaino facebookolona miorinadokam-barotra miorina amin'ny olonavarotra miorina amin'ny olonafamantaranaTwitter
Fitaovana Aza Manao ny Marketer